Puntland: qorshaha horumarinta Puntland oo lagu daahfuray Garoowe (Muuqaal) – Radio Daljir
Puntland: qorshaha horumarinta Puntland oo lagu daahfuray Garoowe (Muuqaal)
Agoosto 7, 2019 12:25 g 0
Daahfurka diyaarinta qorshaha horumarinta Puntland ee shanta sano ee soocota ayaa lagu daah furay munaasibad balaaran oo ka dhacday xarunta Hay’ada horumarinta cilmi baarisaha Puntland ee PDRC. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni, golihiisa wasiirada, xildhibaano baarlamaanka ah. QM iyo ururada bulshada ayaa ka qaybgalay daahfurka qorshaha horumarinta Puntland.
Wakiil ka socdey QM oo hadal ka jeediyey munaasibada ayaa bogaadiyey Puntland oo ku guulaysatey horgelinta qorshe sanadaysan mudooyinkii lasoo dhaafay isagoo kula taliyey in qorshaha uu ka dhex muuqdo doorka miisaaniyada Puntland ee horuminta loogu talagalay.
Wasiirka Wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange ayaa ka sheekeeyey qorshaha horumarinta ee ay diyaarinayaan.
Ugu danbayna Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa si rasmi ah u daahfuray qorshaha horimarinta ee Puntland isagoo sheegay in qorshahani yahay ka horumarinta ayna jiraan qorshayaal kale sida kan Amniga oo u degsan dawlada Puntland.
Diyaarinta qorshaha horumarinta Puntland ee shanta sano ee soocota ayaa lagu daah furay munaasibad balaaran oo ka dhacday magaalada Garoowe
Posted by Radio Daljir on Wednesday, August 7, 2019
Uncategorized 9737 Wararka 18992
Caawa & Daljir iyo Axmed Shiikh Maxamed (Tallman), Daljir Burtinle (dhegayso)
Maxaad kala socotaa Kaluumaysada Thailand ee kuxayiran xeebta Bosaaso? (Akhriso)